Tue, Mar 19, 2019 | 14:07:30 NST
17:58 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, फागुन ८ – अभिनेता गौरव पहारी यतिबेला सिनेमा ‘साईँली’ छायाकंनको तयारीमा जुटेका छन् । यसका अलावा उनको अभिनय रहेको सिनेमा होलिडे पोष्ट प्रोडक्शनमा छ भने सिनेमा पसिना वैशाखमा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ ।
सिनेमा ‘मन्जरी’बाट डेब्यू गरेका गौरवले दोस्रो सिनेमाको रुपमा ‘होस्टेल’मा काम गर्ने मौका पाए । यो सिनेमामा काम गर्ने अवसर उनलाई नारी पत्रिकाले जुराइदिएको थियो । आज उनले हामीसँग दोस्रो सिनेमा ‘होस्टेल’मा काम गर्दाको अनुभव सेयर गरेका छन् ।
पहिलो सिनेमा ‘मन्जरी’पछि नारी पत्रिकामा मेरो अन्तर्वार्ता छापिएको थियो । त्यो चाहिँ हाम्रो निर्माता सुनिल रावल दाईले देख्नुभएछ । अनि उहाँसँग नम्बर रहेनछ र उहाँले सुब्रत आचार्य दाइसँग नम्बर मागेर मलाई फोन गर्नुभयो । सायद ११ बजेतिर होला उहाँले मलाई फोन गर्नु भएको थियो ।
अनि उहाँले भाइ म ‘सायद’को निर्माता सुनिल रावल भनेर भन्नुभयो । अनि एकअर्काको हालखबर सोध्योैँ । अनि दाइले मेरो शेड्युल सोध्नुभयो । मैले समय छ भनेपछि हामीले त्यही दिन दिउँसो भेट्यौँ र कुराकानी गर्यौँ । हामीले दरबारमार्गमा भेटेका थियौँ । त्यहाँ निर्देशक र सुनिल दाइ हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ उहाँहरुले मलाई सिनेमाको चरित्रको बारेमा भन्नु भयो ।
अनि त्यो चरित्रको बारेमा सुनाउँदा मलाई यस्तो लाग्यो कि, सायद उहाँले मलाई बाल्यकालदेखि नै चिन्नुहुन्छ । ‘होस्टेल’मा मैले जुन चरित्र निर्वाह गरेको छु, म स्कुल जीवनमा ठ्याक्कै त्यस्तै नै थिएँ । त्यो सुनेर म त एकछिन त अचम्म परेँ । यो मान्छेले मलाई पहिलेदेखि नै चिनेको हो की के हो ! भनेर । अनि मैले त्यहिँ नै सिनेमामा काम गर्ने निर्णय लिएँ ।
सिनेमाको नामले चिन्दा खुशी
यो सिनेमाको वर्कशप गर्ने समयमा सलोन र अनमोललाई मैले पहिलो पटक भेटेको हो । वर्कशपकै क्रममा हामी तीन राम्रो साथी पनि बन्यौँ । यो कुरा सिनेमामा पनि कतै न कतै देखिन्छ होला ।
सिनेमाका निर्देशक, निर्माता, अभिनेत्रीहरु प्रकृति श्रेष्ठ, रिस्ता बस्नेत हामी सबै एउटै उमेर समूहको भएर पनि होलो त्यो सिनेमाको छायाकंन त कतिखेर सुरु भयो र कतिखेर सकियो केही थाहै भएन । सिनेमामा मेरो नाम श्री हुन्छ तर मलाई सबैले बाहुन भन्छन् ।
पहिलो सिनेमामा मलाई फोहोरी केटा भनेर चिन्थे । यसरी सिनेमाको क्यारेक्टरको नामले नै मलाई दर्शकले चिन्दा एकदमै खुशी लाग्छ ।
शेटमा अनमोलको रमाइलो
अनमोलका बारेमा मानिसहरुले सोच्ने सबै कुराहरु गलत हुन् भन्ने सँगै काम गर्दा थाहा हुन्छ । सिनेमामा मात्रै देखेर जज गर्नेहरुले उसलाई घमण्डी छ भन्ने सोच्नुहुन्छ । तर वास्तविक जीवनमा उ अरुले सोचेको भन्दा एकदमै उल्टो छ । रमाइलो गरिरहनु पर्ने व्यक्ति हो अनमोल ।
संगत गरिसकेको मान्छेलाई सोध्ने हो भने ए ! अनमोल यस्तो पनि छ र ? भन्ने लाग्छ । सिनेमामा हामीले. सिन दिईसकेपछि पनि उसले नै बढी रमाईलो गर्थ्यो । विभिन्न जोक्सहरु सुनाइरहने गर्थ्यो । सिनेमाको सेटमा रमाइलो गर्ने र उट्पट्याङ गरिरहनु पर्ने अनमोललाई त ।
केटी छ भने पनि मतलबै नगरी जोक्सहरु सुनाउने गर्थ्यो । लेडिजहरुले नराम्रो मान्न सक्ने पनि हुन्छ नि कुनै तर अनमोलले त ती कुराहरुलाई वास्तै नगर्ने के । पछि मैले अनमोलसँग सिनेमा ‘गाजलु’मा पनि काम गर्ने मौका पाएँ । हामी ‘होस्टेल’कै चार जना दोहोरिएका छौँ । अनमोल म, सलोन अनि निर्देशक हेमराज बिसी ।
हेमराज सजिलो निर्देशक
हेमराजसँग मैले ‘होस्टेल’ र ‘गाजलु’मा काम गर्ने मौका पाएँ । मलाई उसँग घुलमिल भएर पनि होला काम गर्न एकदमै सहज लाग्छ । ऊ त मलाई मात्रै हैन अरुसँग काम गर्न पनि सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
‘होस्टेल’सँग जोडिएको याद
यो सिनेमाको एउटा कुरा के छ भने यसमा हामी तीन जना कलाकार म, अनमोल र सलोनको वास्तविक बुवाहरुले नै बुवाको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । उहाँहरुको भूमिका त सानो छ तर जे होस् बुवाकै रुपमा हुनुहुन्छ ।
मेरो जीवनमा मेरो बुवाले यही सिनेमामा हो पहिलो पटक मेरो बुवा बनेर काम गर्नु भएको । अनि अर्को कुरा सिनेमाको एउटा सिनेमा पानीमा भिज्नु पर्ने थियो त्यसमा एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई । चिसो मौसमको समयमा टौदहमा हामीले छायाकंन गरेका थियौँ ।
ट्याङकरबाट पानी खन्याएको खन्याई । चिसोले गाह्रो भयो । तर पछि पर्दामा हेर्दा भने एकदमै रमाईलो लाग्यो । जे होस् सिन राम्रो भएको रहेछ ।